Kate's River Cabin eduze nomfula i-Little Red
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Jerry
I-Kate's River Cabin iyindlu yezingodo zemisedari etholakala e-Red River Trout Resort, e-Heber Springs, e-Arkansas. I-Little Red River inikeza ukudoba okuhle kakhulu kwe-trout ezintabeni zase-Ozark. Maqondana ngqo nekhabhinethi kunedokodo elintantayo lokudoba nge-spin noma ungakwazi ukundiza izinhlanzi ngokugwedla endaweni yokungena ye-Winkley Shoals. Le khabhini ingezansi komfula ukusuka eGreer's Ferry National Fish Hatchery. Kunezinkulungwane zama-trout akhululwa e-Little Red River minyaka yonke.
Ikhabethe lezingodo lomsedari linamakamelo okulala ama-2 (umbhede ongusayizi wendlovukazi ongu-1 kanye nemibhede engusayizi wamawele angu-3). Ikhabethe linefenisha ephelele futhi lilungele ukuhlala kwakho okuzolile, okuphumuzayo. Impahla ihlanganisa i-TV yesikrini esiyisicaba, uxhumano lwe-inthanethi ye-Wi-Fi, isiqandisi esigcwele usayizi, umshini wokugeza izitsha, i-microwave nazo zonke izitsha zokupheka, amabhodwe namapani. Uma unquma ukugcoba izinhlanzi zakho ezintsha, kune-grill yamalahle etholakala ngqo ngaphandle kompheme ongaphambili.
4.97 ·94 okushiwo abanye
Uma ukhetha ukudla ngaphandle, kunezindawo zokudlela ezimbalwa eduze nekhabhini ezinikezela ngezidlo zasendaweni zase-Ozark Mountain. I-Little Red River ne-Sugarloaf Mountain zinikeza inkundla enhle kakhulu yokuthwebula izilwane zasendle, imvelo kanye nomfula ogeleza kamnandi. Ngaphansi kwamamayela angu-4 ukuya eGreers Ferry Dam Site Recreation Area yokudoba okusezingeni lomhlaba, ukushushuluza, kanye ne-scuba diving. Imizuzu emi-5 kuphela ukuya enkabeni yedolobha i-Heber Springs enezitolo ezihlukile, ipaki yedolobha, kanye nethiyetha yama-movie.
Izotholakala ngekholi yocingo (870)588-7320 noma (870)588-7321.